Top 3 Ụzọ maka Olee otú iji Chọta ekwentị Number on iPhone
Ọ bụrụ na ị nso nso a zụrụ ihe iPhone, mgbe ahụ, na-echeta nọmba ekwentị gị ga-ewe oge. Ọ bụ bụghị ihe ọhụrụ ịjụ gị enyi ma ọ bụ ikwu "ihe bụ ihe m nọmba?" Apple mere ka ọ dị mfe maka iPhone ọrụ aka ịchọta ha nọmba ekwentị na iji a dịgasị iche iche nke dị iche iche outlets. Ị nwere ike ịchọta nọmba ekwentị gị site na iji gị n'ezie ekwentị site na ntọala nhọrọ, ma ọ bụ na gị na ndepụta nke kọntaktị. I nwekwara ike ịhụ nọmba ekwentị gị na iTunes mgbe Ijikọ ekwentị gị na kọmputa gị.
1.On Your iPhone NchNhr
Kasị nkịtị na kacha usoro nke n'ịchọpụta nọmba ekwentị gị bụ site na ntọala menu na ekwentị gị. Mgbe akpọchi ekwentị gị, ị kwesịrị ị na-na n'ụlọ ihuenyo. Si n'ụlọ menu na ngwaọrụ gị, enweta akara ngosi na-ekwu, "ntọala", na mgbe ahụ enweta "ekwentị" na-esote na ihuenyo. Gị iPhone nọmba kwesịrị-ahụ ga-depụtara na n'elu nke ihuenyo-esote "My Number".
2.In kọntaktị gị
Ọzọ usoro nke n'ịchọpụta nọmba ekwentị gị site na ngwaọrụ gị bụ site na gị kọntaktị na ndepụta. Si n'ụlọ menu, enweta na "Ndi ana-akpo" akara ngosi. Akwatu site n'elu na ndetu kọntaktị, na nọmba ekwentị gị ga-ahụ anya na nnọọ n'elu ihuenyo.
Ọ bụrụ na ndị n'elu kwuru banyere nzọụkwụ kụrụ afọ n'ala mgbe ahụ na e nwere otu ikpeazụ nhọrọ na kwesịrị inyere gị aka ịchọta nọmba ekwentị gị. Mgbe ị na jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị wee mepee iTunes software, ọ ga-aha ozi dị mkpa banyere ekwentị gị, dị ka Oghere Usoro ọgụgụ na nọmba ekwentị gị.
Ikwunye ekwentị gị n'ime USB eriri na mgbe ahụ nkwụnye ahụ eriri n'ime USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa gị. Mgbe ị mepee iTunes ngwa na kọmputa gị ị ga-ahụ a na kọlụm na ekpe n'akụkụ aka. Pịa "Devices" na mgbe "iPhone". A taabụ na n'elu kwesịrị ugbu a na-ekwu "Summary" na nọmba ekwentị gị ga-edepụtara, tinyere ndị ọzọ ihe ọmụma banyere gị na ngwaọrụ.
Na obere bụrụ na usoro a na-adịghị arụ ọrụ, e nwere otu ụzọ ọzọ chọta nọmba ekwentị gị na iTunes:
Site n'elu aka ekpe n'akụkụ ihuenyo, pịa na menu bọtịnụ na a dobe ala menu ga-apụta.
Tinyere n'elu ihuenyo, e nwere menu dị iche iche na taabụ. Họrọ "Devices".
A ndepụta nke dị iche iche iPhone ngwaahịa na jikọọ na iTunes akaụntụ ga-apụta.
Jide gị òké n'elu chọrọ ngwaọrụ na nọmba ekwentị ga-edepụtara tinyere ndị ọzọ ozi dị ka Oghere Usoro ahụ ọnụ ọgụgụ na IMEI.
Apple enye software mmelite maka iTunes na iPhone anọgide. Ọ bụrụ na otu usoro nke achọta nọmba ekwentị gị anaghị arụ ọrụ, adịghị inwe nkụda mmụọ, ibugharịa na nzọụkwụ ọzọ. Jide n'aka na ị na-emelite gị software mgbe nile iji anọ n'elu-ụbọchị na ọhụrụ iPhone technology.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Chọpụta ekwentị gị Number On Your iPhone